I-IGP Orders Probe Ingena kwiD'banj Kwi-Allegation yeRape- Iindaba zaseNigeria
Ioyile yePython: Isisombululo esifihlakeleyo sesikhumba esigqibeleleyo
II-nspector-General of Commander's Police Probe ka-D'banj ngesityholo sokudlwengula, i-Nkundla ePhakamileyo yase-US igwebe uTrump kwityala le-DACA, uNeymar wayalela ukuba ahlawule i-Barcelona yinkundla. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. Umhloli-Jikelele wamapolisa u-D'banj malunga nesityholo sokudlwengula
UDapo D'banj Oyebanjo
Umhloli-Jikelele wamapolisa, Mohammed Adamu uyalele ukuba kwenziwe uphando malunga nesityholo sokudlwengula esenziwe kumculi womculo, UDapo Oyebanjo kwaziwa njenge D'banj by Seyitan Babatayo. Ngokwamajelo eendaba, i-IG iyalele ukuba kwenziwe le projekthi kulandela isikhalazo esibhalwe ligqwetha eliza e-Babatayo, uMnu. UTommy Ojoge-UDaniel.
Kwileta ebibhekiswe kuSekela Mphathi-Jikelele wamaPolisa, iSebe loPhando ngezoMkhosi, kwindawo eyi-10, eGarki, e-Abuja, i-IG icele ukuba uxwebhu lwezikhalazo luphathwe ngokufanelekileyo.
Umhlobo ka-Miss Babatayo, UBenjamin Ese, wenza izityholo zokudlwengula kuqala, esithi u-Seyitan wadlwengulwa nge-31 kaDisemba ngo-2018, kwihotele yaseGlee eVictoria Island, eLagos. Lo mbandela uthathe elinye ngoLwesithathu, nge-17 kaJuni xa uBabatayo waye wabanjwa ngamapolisa avela eSodipo Command, eIkeja.
Igqwetha lakhe Olamide Omileye ka-Ojoge, u-Omileye, kunye namahlakani, batyhola ngelithi wanyanzelwa liqela likaD'banj ukuba licime ii-tweets zakhe kwisityholo sokudlwengula ngelixa eseluvalelweni lwamapolisa.
2. Umsasazi woxolo waseGhana uNana Adjei Sikapa ufile
UDaniel Adjei Peprah woxolo lwe-Ukhozi aziwa njenge Nana Adjei Sikapa ufile.
Uxolo FM's UDaniel Adjei Peprah eyaziwa njenge UNana Adjei Sikapa ufile. Iingxelo zithi umsasazi odumileyo owakha wabamba imiboniso ngaphambili Wo gyedie ne s3n kwaye Wo b b3 a me te b3 kudala egula.
Ingxelo ithi wabhubha emva kokugula okufutshane kwisibhedlele iRidge eAccra. Umntu asebenza naye kuXolo FM, UDan Kweku Yeboah uphakathi kwabaninzi abasabele iindaba ezindabeni zosasazo lwentlalo.
“IINTSUKU ezintsha Usidlulisile uNana Adjei Sikapa woKhozi FM, " Umnumzana Eweah ubhale kwiphepha le-Facebook.
3. Iinkonzo ezintandathu zokhathalelo lomntu ngamnye, kubandakanya neenwele, ezivunyelwe ukuvula eMzantsi Afrika
IGazethi esayinwe nguMphathiswa Wezophuhliso Lwamashishini Amancinci Khumbudzo Ntshavheni kwaye ipapashwe ngolwesiHlanu, nge-19 kaJuni, ivumele ishishini leenkonzo zononophelo lwabucala, kubandakanya neenwele, ukuba zisebenze phantsi kwenqanaba 3 eliPhezulu.
Nangona umzi mveliso unokuvula ngokusemthethweni, unokukwenza oko kuphela phantsi kwemeko ezingqongqo kakhulu. Ezi protocol ziqala ukusebenza ngomhla wopapasho. Iinkonzo ezivunyelweyo, ezi; Ukulungiswa kweenwele, ukuvinjwa, iinkonzo ze-manicure kunye ne-pedicure, unyango lobuso kunye nokwenza imilo, ii-tattoos, kunye nokubhoboza, kunokuqala ngokusebenza, uqinisekisa ukuthotyelwa ngokupheleleyo kweeprotokholi ezifanelekileyo.
4. INkundla ePhakamileyo yase-US igwebe uTrump 'kwityala' le-DACA
Ababhikishi bacule phambi kwesakhiwo saseMelika kunye nokuNyanzeliswa kweSiko emva kwesigqibo seNkundla ePhakamileyo
INkundla ePhakamileyo yase-US yajongana noMongameli wase-US uDonald Trump Umqobo ophambili kwimigaqo-nkqubo yakhe yokufudukela kwelinye ilizwe, ilawula isigqibo sokuphelisa inkqubo yokukhuphela abagxothi abangama-650,000, ebizwa ngokuba "ngabaphuphayo", abangena eUnited States njengabantwana ngaphandle kwamaxwebhu.
Ijaji ngoLwesine yaxhasa izigwebo zenkundla ephantsi ezathi zafumana intshukumo kaTrump ka-2017 yokuhlengahlengisa inkqubo ye-Defended Action yokufika kwabaNtwana (i-DACA), eyakhiwa ngonyaka ka-2012 ngumanduleli wakhe wokuqala wentando yesininzi. UBarack Obama, yayingekho semthethweni.
5. UNeymar wayalela ukuba ahlawule iklabhu yase-Barcelona ye-6.7m yeuros
UNeymar wayishiya iBarcelona ngo-2017
EParis St-Germain phambili Neymar Kuya kufuneka ahlawule i-6.7m yeuros (i- £ 6.1m) kwiklabhu yangaphambili yeBarcelona, ​​inkundla yaseSpain iye yagweba. I-Brazil yamazwe aphesheya ibanga ukuba ibityholwe nge-43.6m ye-euro kwiibhonasi zokunyaniseka yiBarcelona, ​​eyayihambileyo ngo-Agasti ka-2017.
Ijaji yagweba icala likaLa Liga kodwa uNymar oneminyaka engama-28 ubudala, owafaka isimangalo kwityala elingephi emva kogqithiso, unokufaka isibheno ngokuchasene nesigqibo. I-Barcelona ithe bayasamkela isigwebo kwaye bazakuqhubeka bezikhusela ngokubonakalayo izilangazelelo zabo ezisemthethweni.
Bona kwakho: Oosaziwayo bethu abaDumileyo baDume ngokuDala wowama-2019